यी ४ कारण महिलाहरुले पटक्कै मन पराउदैनन् क ण्डम – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी ४ कारण महिलाहरुले पटक्कै मन पराउदैनन् क ण्डम
सुरक्षित से/क्सका लागि क’ण्ड/म भरपर्दो अ-स्थायी सा-धान मानिन्छ । जसले विभिन्न सं/क्र/म-णबाट समेत जोगाउन मद्धत गर्छ । तर, धेरै महिलाहरुलाई क’/ण्डमको प्रयोग मनपर्दैन । यसका मुख्य चार कारणहरु रहेका छन् ।
२. चर/म आ/नन्दको कमी- केही युवतीहरुका अनुसार क’ण्ड/म लगाएर से’/क्स गर्दा च/म आन/न्द मिल्दैन । यसै कारण उनीहरुलाई से’/क्स पा’र्टन/रले क’/ण्ड/म लगाएको मनपर्दैन । उनीहरुलाई ‘स्कि-‘न टु स्कि’न टच’ मनपर्छ ।
३. बा-सना- केही युवतीहरुले क’ण्ड/मको बास-नालाई लिएर आफ्नो पा’र्टन-रसँग वि’-वा/द गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई क’ण्ड-मको बा-सना मनपर्दैन ।
४. फु/’ट्ने ड’र- से’/क्सको समयमा महिलाहरुलाई क’ण्ड/म फु’/ट्ने ड/’रले निकै स-ता’उने गर्छ । यसका कारण उनीहरुले चाहेजस्तो से’/क्स आ–नन्द लिन सक्दैनन् । जे सुकै भएपनि प्रत्येक जोडीले सुरक्षित यौ’/नस/म्पर्क गुर्नपर्छ । विभिन्न समस्या एवम रो’गहरुबाट सं-क्र’मण हुनुभन्दा सुरक्षित यौ/न आ-नन्द लिनु नै हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ ।
यो पनि- यस्ता ७ टुटे-फुटेका सामान घरमा राख्दै नराख्नुस्, अशुभ हुन्छ
बास्तु दोष भयो भने घरपरिवारमा आर्थिक सं-कटसम्बन्धी समस्याहरु आउने गर्छ । त्यतिमात्र होइन पारिवारीक माहोल पनि खटप-ट भएर असफल हुने कारण पनि बन्न सक्छ ।
बास्तुको अनुसार घरमा टुटे-फुटेका सामान राख्दा नकारात्मक उर्जा पैदा हुन्छ । जसका कारण आर्थिक रुपमा हा-नी नोक्सानी हुने गर्छ । यति मात्र होइन जसका कारण मा-नसिक त-नावको कारण पनि बन्ने गर्छ ।
भान्साकोठामा पुराना भइसकेका र टुटेफुटेका भाँडाकुँडा राख्दा महालक्ष्मी अप्रसन्न हुने र घरमा दरिद्रताका साथसाथै आर्थिक हा-नी हुने गर्छ ।
बास्तुको अनुसार घरमा चल्न छोडेको वा बिग्रिएको घडी घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ । यसले परिवारको सदस्यको उन्नति हुन रोक्छ ।
फुटेको, चर्केको वा ऐनाको टु-क्रा बास्तुको अनुसार एकदमै ठूलो दोष हो । यसले घरमा नकारात्मक उर्जा सक्रिय गराउँन मद्दत गर्छ । जसले गर्दा परिवारको सदस्य मानसिक त-नावको सामाना गर्नुपर्छ ।
वैवाहिक जीवन सधैँ सुखद बनाउँन चाहानुहुन्छ भने घरमा भएको पलङ वा खा-ट भाँ-चिएको हुनुहुँदैन । यदि सुत्ने वि-स्तारा भाँचिएको छ वा टुटेको छ भने वैवाहिक जीवनमा तना-व सिर्जना हुन्छ ।
घरमा राखिएको तस्बिरका फ्रेम पनि फु-टेको वा च-र्किएको छ भने तुरुन्तै हटाइदिनुपर्छ । च्या-तिएको र यस्ता फुटेका तस्बिर राखेमा घरमा परिवारकोबीचमा मतभेद पैदा हुन्छ ।
घरभित्र छिर्ने ढोका वा गेट टु-टेको छ भने अशुभ मानिन्छ । यसबाट घरमा नकारात्मक उर्जा गर्छ ।
बास्तुको अनुसार घरमा टुटे-फुटेका फर्निचर राख्दा अशान्ति फैलन्छ ।